Xildhibaanada Damul-Jadiid oo uu shir khaasa ugu soo xirmay dalka Tanzania - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanada Damul-Jadiid oo uu shir khaasa ugu soo xirmay dalka Tanzania
Xildhibaanada Damul-Jadiid oo uu shir khaasa ugu soo xirmay dalka Tanzania
Dar-es-Salaam (Caasimada Online) – Sida ay kusoo waramayaan illo ku dhow dhow Koox Siyaasadeedka Damul-Jadiid, waxaa shir Khaasa oo ay isugu yimaaden Xildhibaano ka tirsan Damul-Jadiid uu kusoo xirmay magaalada Dar-es-Salaam ee dalka Tanzania.
Shirkan oo ay ka qeybqaaten Xildhibaano dhan ilaa Toban ayaa waxaa hogaaminaayay Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu saldhigtay dalka Tanzania.
Shirka oo ahaa mid khaas ah ayaa waxa ay Xildhibaanada ku kala qaaten macluumaad ku saabsan halka ay iminka taagan tahay Siyaasada Somalia iyo kaalinta kaga aadan kasoo dhexmuuqashada Dowlada loogu wanqalay Nabad iyo Nolol.
Xildhibaanada qeybta ka ahaa shirka ayaa u badnaa kuwa baarlamaanka Somalia oo uu ka dhexmuuqday Xildhibaanka gacanta midig u ah Xasan Sheekh ee Faarax C/qaadir iyo dhibaano kale oo dhowr ah.
Qorshooyinka lagu dajiyey shirka aan lasii shaacin ayaa waxaakamid ahaa dib-u-soo nooleynta qorshooyinkooda Siyaasadeed,Kasbashada Xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa Madaxabanaan iyo in xooga la saaro ku dhex milmida Xukuumada hadda jirta si looga dhexmuuqdo Siyaasada.
Dhinaca kale, Xisbiga Damul-Jadiid oo saameyn ku dhexlahaa Siyaasada afartii sano ee tagtay ayaa iminka ololo ugu jira sida ay mar kale u hanan lahaayen dowlada la filaayo 2020 iyo wixii ka danbeeya.